Pakistàna: Nahoana No Bhutto, Ary Hanao Ahoana i Pakistan Ankehitriny? · Global Voices teny Malagasy
Pakistàna: Nahoana No Bhutto, Ary Hanao Ahoana i Pakistan Ankehitriny?
Voadika ny 16 Avrily 2018 7:41 GMT
Maro dia maro ireo hetsika miely manerana ny tontolon'ny bolongana Pakistaney sy any ivelany raha toa naka toerana kosa ny mpitondra hentitra sy manana fahaiza-mitarika. Mampanahy ireo blaogera sasantsasany ny toeran'ny lalàna sy ny filaminana, amin'ny fanomezany fitantaràna manokana momba ny herisetra eny an-dalambe. Misy ihany koa ireo vinany mikasika ireo fifidianana efa antomotra, sy ny mety ho fanemorana. Fametrahana mialoha ny olana, anehoan'ireo blaogy sasantsasany hevitra ny mikasika ireo lova navelan'i Benazir Bhutto, ny hoavin'i Pakistàna sy ireo toa ahiahiana ho nanome baiko ny famonoana, na dia efa nanambara ny maha-tomponandraikitra azy aza ny Al-Qaeda.
Hazavain'i Red Diary ny antony nikendrena an'i Bhutto, sy ireo korontana naterany.
Ny tena mety hisian'ny fisandratan'i Benazir laika eo amin'ny fitondrana no nahatonga azy ho loza mitatao mahafaty ho an'ireo ao amin'ny Fanjakana izay nitaiza fitiavana an'ireo Fondamantalista Silamo, izay ahitana ireo sampam-pitsikilovana fanta-bahoaka, toy ny ISI, nifamatotra akaiky dia akaiky nanomboka tamin'ny ady mangatsiaka sy ny ady tao Afghanistan. Nanjary marika famantarana ny fanoherana an'ireo silamo mpanao antendrony i Benazir Bhutto – izay monina ao anatiny sy ivelan'ny Fanjakana. Nijoroany ny maha-laika sy ny fanavaozana manohitra ny fironana tsy liam-pivoarana sy mifikitra amin'ny nentin-drazana .
Manamafy ireo blaogera sasantsany fa na tsy manaiky ny politikan'i Benazir Bhutto aza izy ireo, na manohana ny antokony – Pakistan Peoples Party, tena zava-doza ny karazana fanafihana sahala amin'io ary azo hitarafana ny safotofoto izay ampoizina hiantraika ao Pakistàna. Asa fampihorohoroana no hilazan'ny Muslim Matters azy, ary melohiny ny herisetra atao fitaovana famahàna olana.
Tena fampihorohoroana ranoiray io izay tsy maintsy helohin'ny rehetra, finoana na ireo hafa. Raha misy manana olana mikasika ny politikany, ny làlana tsara indrindra dia ny mampiasa ny peniny sy ny sainy mba handresena lahatra hanoherana ny ideolojiany, tsy mampiasa tetkiadin'ny kanosa manampina ny vavan'izay tsy vitanao iadiana hevitra akory. Vallifaty no herisetra izay handetika an'i Pakistàna raha toa tsy mifoha ny vahoaka no sady tsy miaiky ny ratsy ataony (araka ny fandikàna silamo sy ara-tsosialy).
Manoratra lahatsoratra iray eo amin'ny Huffington Post i Ali Eteraz, manisy feo amina fijery mitovitovy amin'izay:
Na inona na inona fomba fijerin'ny olona iray an'i Bhutto – ny ahy dia tena miiba – izy no filoha demokratika laika voalohany tao Pakistàna. Izy no nanao ireo fanambaràna mikasika ny fisamborana an'i Ben Laden, namongotra tamin'ny fotony ny fomba madrassa mamoafady, ary niala tsiny tamin'ny fanomezana alàlana ny Talibàna haka fahefana nandritra ny fotoana niahiany, tao anatin'ireo taona 90. Mitondra dona henjana eo amin'ny hetsika fanoherana ny mahery fihetsika ao Pakistàna ny famonoana azy. Ampahatsorana no hilazana fa, raha ny zavamisy amin'izao fotoana izao, tsy misy hafa mpitarika demokratika manohitra ny mahery fihetsika ao Pakistàna.
Manana lahatsoratra mitanisa ny fisavoritahana teny an-dalambe i Metroblogging Karachi. Afantok'i Tabish Bhimani ny sainy ho amin'ny mikasika ny vokatr'io zava-doza io, ary mampilaza amin'ireo olona mba hitandrina rehefa hivoaka ny tranony.
Izay ezahako lazaina eto, dia tsy hoe akory ny iray amin'ireny olona na fikambanana ireny no nahavita heloka bevava natosiky ny fankahalàna, vono olona iray, nandray fanapahankevitra momba izay hiafarana, tsy firenena iray fotsiny, fa ny zanak'olombelona; fa izay ezahiko ambara, raha ny tena marina, dia misy fitovian'isa amin'ireo vina amin'izay mety mitranga sy ny antony, ary hoe tsy maintsy mitazona ho antska izay fitsarantsika isika. Izay mitranga ao amin'ny firenena toa an'i Pakistàna, izay tena malaza ao amin'ny media iraisam-pirenena, dia misy fiantraikany manerantany.
Manome fanavaozana ara-potoana ny momba ilay zavatra nistranga sy ny taoriany, no sady mametraka ao amin'ny tambajotra ny boky iray fiarahamiory ho an'i Benazir Bhutto i Teeth Maestro.
Anatin'ny ezaka ho fanomezana ny vondrom-piarahamonina ety anaty tambajotra ny fahafahany hanolotra fiarahamiory amin'ny fianakaviana manamanjo sy ireo an'arivony ara-bakiteny mpanaradia ny Peoples Party, iriko ny hanomboka ity boky fiarahamiory ity ho an'i Benazir Bhutto. Raisko ho andraikitro izaho samirery ny hampiseho ny lisitra feno any amin'ny biraon'ny Pakistana Peoples Party mba ho araikitra amin'ilay tena boky firaketana fiarahamiory.
2 herinandro izayPakistana
Mihenjana ny fifandraisan'ny Haindò sy ny Miozolomana taorian'ny fandrobana ny tempoly Haindò tao an-tanàndehibe Pakistaney
02 Febroary 2021Pakistana
Miatrika fanoherana ny fananganana ny tempoly Haindò voalohany ao Islamabad
26 Janoary 2021Nepal
Hetsi-panoherana manoloana ny setriny ataon'i Nepal amin'ny ady amin'ny COVID-19 ataon'ny tanoralahy iray
Mamisoa Isabelle Raveloaritiana: Nivady izahay noho ny Global Voices